Baboshelwe ukuntshontsha ugologo nemali | News24
Baboshelwe ukuntshontsha ugologo nemali
KUBOSHWE abasolwa ababili abasolwa ngokuphanga endaweni yokucima ukoma e-Three Monkeys, e-Driefontein, ngeledlule.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Colonel Thembeka Mbhele uthe lesi sigameko senzeke ngomhla ka-11 kuLwezi (November) ngabo 10:30pm.
Uthe: “Ummangali ubehlezi nomyeni wakhe ebhizinisini lakhe ngenkathi bezwa umsindo omkhulu. Ngenkathi ummangali nowakwakhe beyohlola ukuthi ngabe yini imbangela yomsindo, babone abasolwa abangaziwa bebulala ifastela futhi begqekeza umnyango wesitolo. Abasolwa bagcine bekwazile ukugqekeza bangena ngaphakathi esitolo, bahlasela ummangali nomyeni wakhe ngaphambi kokuba bentshontshe imali kanye notshwala,” kusho u-Colonel Mbhele.
Kusolaka ukuthi abasolwa bantshontshe ikesi elilodwa lika gologo kanye nemali engu-R3500.
U-Colonele Mbhele uqhube wathi umyeni kammangali uphuntunyiswe esibhedlela ngemuva kwalesi sigameko ukuthola usizo kodokotela njengoba ebelimale kanzima.
Uthe: “Uphenyo olenziwe amaphoyisa luholele ekutheni kuboshwe abasolwa ababili abaneminyaka engu-28 kanye no-29. Abasolwa baboshwe ngeSonto bathweswa icala lokuphanga ibhizinisi kanti kulindeleke ukuthi bazovela enkantolo yaKwaDukuza ngoLwesibili, ngomhla ka-15 kuLwezi,” kusho u-Colonel Mbhele.
Kusolakala ukuthi abasolwa baboshwe endaweni yaseShakashead ngemuva kokuthi bebanjwe amalungu omphakathi.